Maqaal : Musuqmaasuqa Jacaylka | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
Maqaal : Musuqmaasuqa Jacaylka
Maad ka yaabtay ciwaanka maqaalka? Inta aanad ila yaabin ama aanad ila garwaaqsanba, horta, bal maxay kula tahay haddii aynu arar kooban ka horraysiino dulucda qormadda. Inkastoo lagu kala tago eray ahaan marka la qeexayo “jacayl”, haddana ujeedada la isla ogol yahay oo qof kasta oo cabiraya ay ku soo biyo shubanayso qeexidiisu ayaa ah: dareen taban oo xoogan oo kalgacayl leh oo loo qabo wax.
Marar badan bulshooyinku arragtida eraygaas isaga ahi macnayaal badan ayuu ugu fadhiyaa, ka soo qaad bulshadeena, inkastoo uu ka balaadhan yahay siyaalo kala duwana loo fasiran karo, haddana eraygaasi haddii aad ku dhawaaqdo waxa maskaxda ku soo boodaya mid ka dhaxeeya dhadig iyo labood. Balse waxay isweydiintu tahay, inagoo ka soo qaadayna sidaasba, jacaylku labka iyo dhadiga ka dhaxeeya ma wada jacaylbaa mise waxa ku jira jacaylo been-abuur ah (forgery) oo gashan shaadhka iyo dirayska jacaylka? Taas si aynu uga jawaabno, waa maxay jacayl dhab ahi. Waa su’aal adag oo suuraynteeda qof waliba meel ula kacayo, laakiin iyaduna ku soo arooraysa: “jacayl laba ‘nafood’ isku qabaan” halka jacaylka been-abuurka ahi uu yahay: “jacayl laba ‘danood’ ay isku hayaan”. Dad badan labadaa macne ee kala durugsan ayaa iskaga cayn iyo bayd go’a oo iskaga milma. Taasina waxay keenta in jacaylkoodu uu noqdo mid naafo ah oo waliba sirkhaansan! Ka waran haddii lagu weydiiyo su’aashan: jacaylku ma ujeedo la gaadhaa mise dariiq lagu gaadho ujeedo?
Sida ay diinteena iyo dhaqankeenuba ina farayaan, jacaylku waa inuu noqdaa tan danbe. Waa dariiq lagu gaadho ujeedo ah “guur” iyo nolol qoys oo daganaansho leh. Waxa marag ma doon ah, marka labada qof ee jacaylku dhex marayaa, marka horeba ay aaminsan yihiin in jacaylkoodu halkuu geynayaa ay tahay guur ay ku badhaadhaan oo ay ku barwaaqaystaan oo jacaylkooduna isna noqonaya mid waaraya oo aan gaboobayn waligii. Laakiin marka danaha iska caashaqay ay ka xoog bataan labada nafood, waxa hubaal ah in burbur laxaad lahi uu ka dhalanayo guurkooda macanaaska ah ee aan macnaha badan iyo mucda toolmoon midnaa aan ku fadhiyin.
Bulshadeena maanta markaad eegto jacaylku wuxuu kaga soo ururay, fahan khaldan oo ah in jacaylku loo arko ujeedo loo halgamayo gaadhitaankeeda, taas oo sal iyo baarba u tahay sidii loo qancin lahaa oo kaliya baahida bani’aadanimo—xubnaha. Taasina ay meesha ka saarto guurkii iyo ujeedooyinkiisii faraha badnaa ee ay ka mid ahaayeen: taranta, daganaanshaha, dhaqaale kobcinta. Saw kuwii, iyagoo tan oo kale ka hadlaya, meerisyada maansada Jacayl Dhiig ma lagu Qoray ee Hadraawi odhanayaan:
Tahay dhaayo guudkood;
Dharag iyo markaas qudha.
Walaw ay jacayllada noocan ah ay doorkooda muhimka ah ka ciyaarayaan oo keeneen duruufaha nololeed iyo waayaha lala dariska yahay, haddana waa mid dhaawaciisa bulshada oo dhammi u hanaadan tahay, waayo, jacaylka been-abuurka ah waxa uu kaw ka yahay dhibaatooyinkan: dhaqaale xumadda, cuduradda-faafa, xasilooni-darrada, dhaqanka bulshada oo burbura, xumaanta oo laga xishoon waayo iyo musuqmaasuqa.
Jacaylka been-abuurka ah inkasta oo bulshada oo dhammi ay waxyeelo ka soo gaadho, haddana cidda ugu badan ee ugu nugul khasaarahiisu waa haweenka, kuwaas oo udub-dhexaadka bulshadda ah. Bahalaha rag ku sheega ah ee dugaagoobay ay had iyo jeer dabino badan oo ay laac uga dhigeen jacaylkan dhagarta leh ay u qoolaan. Ka warran ummad adhaxda iska jabinaysa? Waxyeeladiisa waxa inagaga filan, ruwaayadaha qiimaha leh ee ay kala leeyihiin; abwaankii weynaa Xassan Sh. Muumin (IHN) uu lahaa ee Shaabeel Naagood iyo ruwaayadda kale ee uu leeyahay abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye) ee Eed Hooyo laga galay. Dhanka kale, gabay xikmad iyo muc suugaaneed oo dihini ku ladhan tahay oo uu tiriyey Sh. Muuse??? Ayaa meerisyo ka mid ahi yihiin:
Gabadhi waa tamaandhee hadday, taabashada diidin;
Oo tuugu fadhataysto saw markaas, tuuris noqon mayso?!
Mallaga yaabaa wakhtigan aynu joogno in haweenku iyaguna qùdhoodu dagaalka ay ku gacan sareeyaan, oo ay hoggaaminayaan Janaraallo tab iyo xeelad badan oo ugu waaweyn yihiin Gen. Isku-Filan iyo Gen. Isku-Fadhi?!
Haddii baryo qaarkood ragga janaalayaasha ahi ama seaman-da gaboobay ay da’ la gabax yidhidhaadeen, ay suuqoodu xaami ku ahaa marka ay noqoto in ay gabadhiba miday ka jalaqsan tahay ay ka xushaan, oo hayn iyo jeeb mudakar ah ugu gacan haadiyaan. Maanta jananadda haweenka ah ee aynu soo sheegnay ayaa ka halisan. Waa mid aynu markhaati ka nahay weerarka cirka, dhulka iyo malaha baddaba ah ee ay haweenkaas iyaga ahi qaarkood ay ka soo qaadayaan dibaddaha—garro oo waa dhulkii seaman-ka iyo jannaalaha lagu yaqaanay, ay iyagoo wata magac kale, iyo naanayso kale, oo malaha magacyada la isla wada yaqaan ay ugu tun weyn yahay SINGLE MOTHER, ay ay xilliyada summerka ama xaggaaga xagaa iyo Yurub ka soo duulaan taggaan—Isku Filan iyo dirkeeda—iyagoo dabasho iyo ugaadhsi xaalufin ah ku wada ragga da’yarta ah.
Waxa Maskaxdeena ku soo dhacaya ruwaayadii caanka baxday ee uu lahaa abwaan Ibraahim Gadhle (IHN) ee Ragaw Aarsi Haween u Adkaysta Markiina; maanta ay tiiyo kale haweenkuna ay kaga aargudanayaan, kolley dagaaladdii qadhaadhaa ee ragga caanka ah ee aynu soo sheegnay ay ku hayeen 50 meeyadii illaa 80 naadkii.
Iska soo wada duuboo, jacaylku maanta wuxuu noqday mid nafsaddii iyo nuxurkiisii diimeed iyo dhaqan ee uu lahaa waayey oo u basaasay cid ka run sheegta. Waxa uu noqday mid danaysi ku dhisan, ha noqoto in dhoof lagu helo ama hayn maaliyadeed oo kale lagu beegsado eh. Wuxuu noqday mid filimadda musalsalka ah ee Turkiga, Miksikaanka, Hindiga iyo filimada Jacaylka ah (Romance) ee Hollywood soo saarto lagu daydo oo xiisaha bilaashka ah la iskula dul-dhaco. Haddii guur lagu heshiiyana uu noqdo mid aan sees adag lagu yagleelin oo markaba duma.
Khasaarahiisuna uu bulshada ku soo noqdo. Iyo tan ugu xun ee sii hurinaysa colaadda jacaylka been-abuurka ah oo ah xaaladda dhaqaale ee adag ee lagu jiro iyo sixir-bararka guurka iyo qiimahiisa inuu sii kaco mooyaane aan soo dagayn ee dalka ka taagan, ee dadkii waaweynaa; ha noqoto culimo, aqoonyahano, madax iyo guud ahaan waxgaradkii bulshadu ay indho madhan iyo af-gudhan uu ku soo eegayaan. Dhaqaale xumadda iyo xasilooni-darrada ee aynu indhaha ku hayno tan ka sii xun ee aan laga soo kaban karini waa, burburka bulshada ku yimaada, oo ay dhibkan aynu ka soo sheekaynay kow u yahay, xalkeeduna waa mid ummadda oo dhan u yaala ee aa cid kaliya laga sugayn, oo aad adigu KOW ka tahay wax ka qabashada musuqa jacaylka haleelay ee ay bulshadeenu u dhaawacan tahay
← WAX LA, AANTA. HA IGU NICIN’Sheeko Jacayl ah
heeso:midho jacayl…..! →